Google yakaita kuti zviwanikwa zviwanikwe kune avo vanofarira kugadzira maapplication eChannel OS | Linux Vakapindwa muropa
Google nhasi yatsikisa chishandiso chitsva che vagadziri vanofarira zvekuvaka zvekushandisa ye Chrome OS (iyo inoshanda sisitimu inopa masimba ecosystem emakomputa eChannelbook) inopa iyo kambani.
Mune blog blog, Iein Valdez, Musoro weChannel OS Developer Hukama, akadaro Chromebook, pamwe nemalaptop zvetsika, vari kuona kuberekwa patsva nekutenda kune COVID-19 denda iro rakamanikidza vanhu kushandisa nguva yakawanda pamakomputa.
Nenguva yakawandisa pamaoko avo, vanhu vari kuwedzera kudonhedza nharembozha vachida zvikwiriso zvikuru.
"Kunyangwe vari vhidhiyo vachikurukura neshamwari uye mhuri, vachitsvaga zvinonakidza maapps nemitambo, kuita zvakawanda kubasa, kana kuita chirongwa chinonakidza, makuru masikirini uye kuita zviri nani kwaita mutsauko wese," akadaro Valdez.
Iine anowedzera kufarirwa Chromebook, zvakasikwa kuti vazhinji vanogadzira vanofarirawo iyo Chrome OS chikuva, saka Google yakazivisa kuburitswa kweChannelOS.dev, webhusaiti nyowani inowanikwa muChirungu neSpanish yakazara nezvinhu izvo sanganisira technical technical zvinyorwa uye ekuvandudza maturusi, zvitsva zvigadzirwa zviziviso uye nezvimwe.
Izvo hazvina basa kana iwe uri webhu, Android kana Linux mushambadzi - iwe unowana maturusi, rubatsiro, uye akanakisa maitiro pa chromeOS.dev izvo zvinokubatsira iwe kugadzira chirongwa hombe chinokwana zvakanaka uye chinotora mukana kune zvese zvinounzwa nemaCbookbook patafura.
Iyo sosi zvakare yakarongedzwa nemablog mablog uye vhidhiyo dzidziso. yakagadzirwa neGoogle vanogadzira uye dzimwe nyanzvi dzeChrome OS, kupi goverana matipi, mabhenefiti, nematambudziko ekuvaka zviitiko zveapp yeiyo Chromebook chikuva.
ChromeOS.dev zvakare inobvumidza vagadziri vatsva kuongorora iyo nyowani Chrome OS dhizaini uye iyo UX yekushandisa mhando nhungamiro iyo inofanirwa kuteverwa kugadzira mitambo uye inofambira mberi webhu kunyorera, kana webhu-based zvinoshandiswa, zveChannel OS.
Zviri pachena kuti Chrome OS timu iri kufara kwazvo yeiyo maonero ezvinozouya kubva ino nyowani saiti / PWA.
Zivisa zvishandiso uye kuziva kwekutanga kune vanogadzira kiyi yekunyatso kuvandudza chiitiko cheapp pa Chrome OS mune ramangwana.
Con chromeOS.dev , timu ikozvino ichave neyakajeka uye yakapfupika portal kwete kwete chete kuendesa anodiwa maturusi uye nhungamiro kune vanogadzira application, asiwo chikuva chekugovana zvidzoreso nenhau.
Zvimwe zve zvitsva zvevagadziri inowanikwa kuburikidza neC ChromeOS.dev inosanganisira itsva inogadziriswa yeLinux terminal Iyo inopa zvetsika maficha senge akavakirwa-mukati tabo uye mapfupi akagadzirirwa kuita kuti multitasking ive nyore.
Uyewo vagadziri vanogona kugadzirisa terminal mavanoshanda nekusarudza madingindira akasiyana ekumashure, furemu, font, uye poresi poindi, uye vanogona kunyange kugadzirisa marongero emenyu kune zvavanofarira ivo.
ChromeOS.dev iyo zvakare inopa kuenderana neiyo Android emulator pa Chrome OS, zvinoreva kuti maChannelbook anogona ikozvino kushandiswa kunyora uye kuyedza Android maapp.
Iine Android emulator, vagadziri vanogona kuyedza maapplication avo pane chero vhezheni yeApple uye chero rudzi rwechigadzirwa, pasina kudikanwa kweiyo Hardware pachayo.
Uyewo inobvumira kuenzanisa nzvimbo dzakasiyana dzemepu, semuenzaniso, pamwe nedzimwe data re sensor kuti uone mashandisiro anoita chikumbiro chako munzira dzakasiyana uye pasi pemamiriro akasiyana ezvakatipoteredza.
Pfungwa iyi ndeyekuti vagadziri vanogona kukwidziridza mashandisiro avo yemhando dzakawanda uye zvishandiso, zvinosanganisira mahwendefa akapetwa uye mafoni, kubva kunzvimbo imwe.
Zvimwe zvinhu zvitsva zvinosanganisira yakagadziridzwa purojekiti wizard mu Android Studio iyo inogona kutsigira akawanda marongero emafoni akawanda uye mapiritsi.
Iko zvakare kune yakavandudzwa default cheki muAndroid's lint chishandiso, chakagadzirirwa kubatsira vanogadzira kugadzirisa encoding nyaya dzinokanganisa mashandiro ekushandisa pane yakakura skrini.
Iyo ChromeOS.dev webhusaiti izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google yakaita kuti zviwanikwa zviwanikwe kune avo vanofarira kugadzira maapplication eChannel OS